Kusho ukuthini ukuthi idivayisi elungiselelwe null? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > Idivayisi emisiwe ayisebenzi - ungaxazulula kanjani
Idivayisi emisiwe ayisebenzi - ungaxazulula kanjani
Kusho ukuthini ukuthi idivayisi elungiselelwe null?
abakwazanga ukufuduswa 'futhi'IdivayisiI-USB \_ VID _... yayikhonakumisiwe. Igama Lomshayeli:null'okuyikushoayinaye umshayeli olayishiwe. Ukukhipha nokufaka kabusha akunamthelela.16 uNovemba. 2016
Sine-Samsung Galaxy S10 ene-Android 10. Uma unefoni ehlukile noma isistimu yokusebenza ingahle ibukeke ithe ukwehluka kancane, kepha izilungiselelo ziyafana. - Konke esizokhuluma ngakho namhlanje kuklanyelwe ukususa umthwalo kumprosesa wefoni yakho, okuzowusheshisa, noma kuzosindisa impilo yebhethri lakho.
Ngizomane ngiyithinte. Sisohlelweni lokusebenza lwezilungiselelo. Okokuqala, sizokhubaza i-nning yedivayisi eseduze. - Ukuskena amadivayisi aseduze kwenza lokho kuzwakala sengathi kunje.
Ifoni yakho ihlala ifuna amanye amadivayisi aseduze angahle afune ukuxhuma futhi angadonsa impilo yakho yebhethri - ngakho-ke ake uthephe ukuxhumeka, thepha Chofoza lapha ukuthola amasethingi wokuxhuma bese uthepha ukuskena kwedivayisi kuseduze, thepha le switch, vula kuvaliwe. - Okulandelayo, sizokhuluma ngokuthi ungakhetha kanjani ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ozozivumela ukuthi ziqhubeke zisebenza ngemuva kwefoni yakho noma ngabe ungayisebenzisi. Kulula ukufika lapho.
Bese uthepha Ulwazi Lwesoftware. Manje thepha inombolo yokwakha kasikhombisa. Okukodwa, ezimbili, ezintathu, ezine, ezinhlanu, eziyisithupha, eziyisikhombisa.
Emuva. - Emuva. Ngakho-ke manje ubona izinketho zonjiniyela futhi wenza iphutha mayelana nefoni.
Thepha Izinketho Zonjiniyela. Futhi sizopheqela phansi ku-Background Check. Ukuhlola Okungemuva. - Kungaphansi kwesigaba Sezinhlelo Zokusebenza - Ngaphansi kwesigaba Sezinhlelo Zokusebenza.
Apps.Background Ukuhlola - Ingemuva Ukuhlola ithebhu. Dlula kulolu hlu bese unaka ngokukhethekile ukuthi iziphi ezinezikhathi ezingaphansi kwazo njengoba zizokutshela ukuthi lolo hlelo lokusebenza noma isevisi isebenzise isikhathi esingakanani iprosesa efonini yakho, kepha izokhipha ibhethri lakho kuphela. - Kulungile. uma kukhona noma yini kulolo hlu, ikakhulukazi izinto ebezikade zisetshenziswa njengezwi le-Bixby. - Ake nje uthephe leyo switch bese uyicisha. - Yicishe ngokushesha.
Lolu ulwazi oluthunyelwe ku-Google noma kubakhi bengemuva be-Android uma ungasebenzisi ifoni yakho. (okungaqondakali) - Ngakho-ke, ake sibuyele ekhasini eliyinhloko nakuhlelo lokusebenza lwezilungiselelo, thepha ithebhu. Nazo-ke.
Bese uthepha kuGoogle. Bese uthepha kulawo machashazi amathathu ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini bese uthepha ku-Usage and Diagnostics. Lapha ungabona le switch encane, ikhona njengamanje, vele uthephe kuyo.
Ngiyazi ukuthi ayaziwa, kepha isathumela imininingwane ngendlela oyisebenzisa ngayo ifoni yakho kumanethiwekhi esikhangiso ukuze bakwazi ukukuthumela izikhangiso ezifanele kakhulu-- bafaka idatha ngawe futhi-ke ungasho ukuthi: kukhulunywa ngamakhukhi egumbini lami lokuphumula . Futhi manje ngokuzumayo ngithola amakhukhi ocingweni lwami - ngiyazi ukuthi kuyaxaka - Ngakho-ke simane nje ngokuthepha inkinobho yangemuva, ekhoneni eliphezulu kwesokunxele sesikrini, bese ubona izikhangiso lapha, thepha kuso, khubaza Ukwenza ngezifiso izikhangiso. Uyazi ukuthi i-athikili icime izilungiselelo ozidingayo ukuze uzivule ukuze uzicishe.
Noma kunjalo, ngokulandelayo sizobheka izilungiselelo zendawo efonini yakho - Ngakho-ke ake sibuyele ekhasini eliyinhloko lohlelo lokusebenza lwe-Amasethingi futhi sizothinta indawo. Into yokuqala esifuna ukuyenza ukuthuthukisa ukunemba. Sebenzisa i-Wi-Fi ne-Bluetooth ukuthola ukutholwa kwendawo okunembile kakhulu ukuskena kwe-Bluetooth.
Ngikubonile impela okuthunyelwe okuningi ezinkundleni lapho abantu bethi ngicime lezi zilungiselelo zombili futhi ngagcina ithoni yempilo yebhethri. Lokhu kungenxa yokuthi igcina nje ukuskena nokuskena nokuskena futhi kudonsa ibhethri lakho - futhi indawo okuyo isasebenza - i-GPS isakhiwe ocingweni, akunjalo? Awudingi ukuba nalezi zinto - ake sibuyele emuva Okulandelayo, ake sikhulume ngomlando wendawo we-google, kuzoba umlando wendawo wazo zonke izindawo oke waya kuzo. Ifana nezindawo ezibalulekile ku-iPhone ezikuvumela ukuthi ugcine uhlu olude lwazo zonke izindawo oke waya kuzo.
Thepha inkinobho bese uthepha ikhefu, ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini, futhi manje lokho kumiswe isikhashana, kulungile. Bese ubuyela kuzilungiselelo zendawo lapha, kanti eyokugcina ukuhlaziywa kwedatha yenethiwekhi. Kufana nokuthumela izibalo zedatha kumphathi wakho. Iponi. - Akusimina futhi.- Lokho kuzovele kushise imbongolo yakho Uqhubeke uthumele imininingwane kumhlinzeki wakho weselula.
Lungisa okwakho sekwephuze kakhulu, siyathengwa. (ehleka) Into elandelayo esifuna ukukhuluma ngayo ukukhawulela idatha yasemuva yezinhlelo zokusebenza ezithile. Njengoba kushiwo ngaphambili, uma uhlelo lokusebenza ligcina ukuthola idatha entsha ngemuva kwefoni yakho, ingakhipha ibhethri lakho ngokushesha okukhulu.
Awufuni nje kuphela ukuphela nge-malware ku-Android yakho ngoba olunye uhlelo lokusebenza lulande olunye uhlelo lokusebenza, bese nge-hellishly, akusizi ngalutho. Ngakho-ke asibuyele emuva, ake sibuyele emuva futhi. Manje silapha ekhasini lezinhlelo zokusebenza eziyinhloko bese uthepha kulawo machashazi amathathu, ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini, bese uthepha ku-Special Access.
Uyini umshayeli ongenamsebenzi?
I-Akunalutho. sys (NULL umshayeliIfayela yiWindowsumshayeli. Ngokuvamile,abashayelizisetshenziswa yiWindows ukunika amandla izinto zangaphakathi ezinjengamakhadi wemifanekiso nokushayela, noma amadivayisi wangaphandle, njengamaphrinta, imidiya yokusekelayo noma amadivayisi wokufaka.
Le ndatshana yenziwe yenziwa yi-Curiosity Stream. Uma ubhalisela okubhaliselwe kuCuriosityStream.com/HAI, uthola ukufinyelela kuNebula - isevisi yokusakaza i-HAI eyingxenye yayo.
Ngelinye ilanga ngiyokwenza ihlaya kabi kakhulu, ngonya olunesihluku, ukuthi omunye wenu uzoshesha. Uzomasha uqonde ngqo ku-DMV eseduze nawe, uphonsa izikweletu ezimbalwa ekhawunteni bese ucela ipuleti elisha elicwebezelayo eline-'SAMSUCKS '”elibhalwe kulo. Ngeshwa lo mfo we-DMV kungenzeka ahlehlise amahlombe akhe akutshele ukuthi i-'SAMSUCKS 'ingenye nje yezinto ongeke uzifake kupuleti lelayisense ngenkathi wenza impikiswano ephoqelela eminye imibono, awukwazi ukuthola izinsongo zokubulawa, uqamba izitho zokuzala, ukusikisela ukuthi uyiphoyisa, ukusolwa ngokwenkolo, ukuthukana, ukubiza ukuqothulwa kwabantu abaningi, uthi udakwe kabi ngenkathi ushayela, noma udidekile ngo-2016, 'ZERO' ngemuva kwalokho.
vimba amawebhusayithi ie
Hhayi 'null' njengoba kungenalutho, kepha 'null' njengoba kunjalo, uyazi, igama elithi 'n.' Ull. 'Yebo,' null 'akuyona into ecasulayo ngasese noma umbono ongacacile ngempela.
Kuhlobene kakhulu nokuthi imininingwane yolwazi yamaphoyisa isebenza kanjani, kepha ukuchaza ukuthi sidinga ukubheka kanjani kuqala? kwenzeke le ndoda eyodwa eyenze iphutha elibi lokushintsha ipuleti layo ilayisense ithi 'ZERO'. Ku-2016, umcwaningi wezokuphepha uJoseph Tartaro uthathe isinqumo sokutholela yena nomkakhe amapuleti amancanyana amhlophe - 'ZERO' for him and 'VOID'. 'yowesifazane.
Uyazi kanjani ... ukuthi lokhu kuphinda kabili kwezomthetho kusho ukuthi 'ngaphandle kwamandla okubopha noma ukusebenza!' Limnandi akunjalo? Yebo, njengoba kuzwakala kuzwakala, u-Romeo wayenenhloso yesibili engqondweni: Wayecabanga ukuthi la mapuleti amahle afanayo angadida izinhlelo zokucaphuna futhi amenze yena nomkakhe baphile impilo yobugebengu obuncane bengatholakalanga - ngisho Ngabe ibhokisi lakho elidabukisayo lamashokolethi likwenzile okokugcina? isetshenziswe kuzo zonke izinhlobo zolwazi oluhlukile lwekhompyutha ukukhombisa imininingwane elahlekile noma engasebenziseki; UTartaro uthole ukuthi lokhu kusebenza nakuwo wonke ama-database asebenzisana namapuleti elayisense laseCalifornia, futhi ngokudabukisayo ubeqinisile ngo-100%.
Esikhundleni sokuwela ngaphansi kwe-radar yamaphoyisa, eshaya izimpawu zesitimela esidlule futhi eqa abantu abahamba ngezinyawo ngaphandle kokushaya impama esihlakaleni, uTartaro wabanjwa waqala ukuqoqa amathikithi kwesokudla nangakwesobunxele - kepha hhayi ngokwephula umthetho ayekwenzile cishe konke ukwephula selokhu abhalisa ipuleti lelayisense, futhi yena nakanjani kwakungekho ukwephula umthetho kunoma yiliphi idolobha elilodwa laseCalifornia elinezimoto eziningi ezahlukahlukene esikhathini sokuzibophezela eminyakeni emibili ngaphambi kokuba ipuleti lakhe selayisense libe khona nakubo bonke abezindaba ababemxoxisa. Kwazi bani? Incazelo elula kunazo zonke, nokho, ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho iphoyisa laseCalifornia elvilaphayo likhohlwa ukufaka inombolo yamapuleti elayisense yethikithi, uhlelo lwalubeka ngaphansi kuka-'ZERO ', okuvele kwaba yipuleti likaTartaro. Sekukonke, wahlawulisa u- $ 12,049 wamadola ngaphambi kokuthi ekugcineni akwazi ukuqeda lolu phupho olubi, olubuye lwenze lesi senzo sothando olubiza kakhulu kusukela esihlalweni sendlu yangasese esiyigugu uBen Affleck J.
Lo wathenga ngo-2002. UJoseph Tartaro wayazi ukuthi wayedlala ngomlilo lapho kushintshwa ipuleti lakhe, kepha uyazi ukuthi ngubani ongazi lutho ngemiphumela yokuxhaphaza amaphutha ezokuphepha ngezilimi zemibuzo ehleliwe? Izingane. Ikakhulukazi izingane ezizelwe nesibongo esibi se. ithole 'zero' ngaphambi kokuthi le mininingwane ibe khona.
Kukhona amashumi ezinkulungwane zabantu emhlabeni wonke ogama labo lokugcina lingu- “zero” futhi, njengepuleti lelayisense likaJoseph Tartaro, basengozini yokubhubhisa cishe noma iyiphi i-database yanamuhla abahlangana nayo. Amasayithi asebenzisa amafomu okubhalisa - njengezindawo zebhange, izitolo zedijithali, amapulatifomu okusakaza, izinsiza zokulethwa kwe-pizza, izindandatho ze-poker ezingekho emthethweni, amabhulogi ezungu, amabhulogi ezinsumansumane zabalandeli, amabhulogi ezinganekwane zabalandeli abangcolile, kahle-hle, noma iyiphi iwebhusayithi, empeleni - hlola i-Think wegama elithi Null bese ucabanga, 'Hmm, lo muntu akanalo igama, kusobala ukuthi akalona ilungu leqiniso lomphakathi ophucukile, ngaphansi kwanoma yiziphi izimo esingabavumela ukuba bajoyine iringi yethu engekho emthethweni eku-inthanethi.' Ngenxa yalokhu, amaNulls omhlaba ayabonana kaningi Ebhekene namawebhusayithi aphahlazekayo, izimbungulu ezingavamile, noma izincazelo ezilula ezingekho nje.
Ngokuqondene ne-intanethi, ziyizipoki, futhi imiphumela ingahle isukele kokucasulayo iye kokudlanga impela. Isibonelo, uChristopher Null, umnikazi weNullMedia LLC, uvamise ukuthola i-imeyili eya ku “Mnu. kwaMedia LCC “- kwaqondana nje futhi negama lomnyango ngokushintshaniswa kwemali okusha kweWendover Productions.
Yebo, ngenkathi zingekho izixazululo ezilula zalezi zinqolobane ezixakile, futhi lelo gama libathumela ekuphikeni okukhohlakele kakhulu ukwedlula omakhelwane bami be-antivax, abahlaziyi bemininingwane baqhamuke neminye imisebenzi yokudala eminyakeni edlule - thatha le ndawo ngokwesibonelo: Isiqhingi. Empeleni le mibhalo akuyona neze iNull Island ngoba yindawo ecatshangelwe ngokuphelele ephawulwe yileli buoy elincane elidabukisayo. Kutholakala ku-0.0, lapho i-equator ihlangana khona ne-meridian eyinhloko, abahlaziyi be-GIS bangeze i-Zero Island kumamephu athile ukusiza ukuthola amaphutha we-geocoding abangelwa igama elithi 'zero'. t ukunquma ukuxhumanisa kwendawo kwendawo ethile - isibonelo, uma uthatha isithombe nge-geo-tagging engasebenzi - indawo ikhishwa njenge- “zero, zero”. iqoqo langempela lezixhumanisi nango-Dec bengifuna ukukubeka ngqo eNull Island - obekuzotshela labo bahlaziyi ukuthi lezo zincwadi ezine ezikhohlisayo zaphinda zashaya ngaphandle kokuthi ubhukuda uye kwi-buoy maphakathi neGulf of Guinea.
Ekhuluma ngeziqhingi, lawo ma-weirdos eWendover Productions akhiphe enye futhi idokhumentari yeNebula yokuqala ngesiqhingi - esibizwa ngeZinsuku Zokugcina zikaMajuro. Labo hlanya baseHalf as Interesting nabo bakhipha i-Nebula yasekuqaleni ngenyanga ezayo, okusho ukuthi isimilo sendaba ukuthi kungenzeka ukuthi ufike eNebula. Ngenhlanhla, ungakwazi.
Ngakho-ke ngesivumelwano esihle kunazo zonke ekusakazeni. Ngama- $ 20 nje kuphela ngonyaka, mayelana nezindleko zesikhwama samaroli e-pizza, ngicabanga - anginasiqiniseko ncamashi - uthola ukufinyelela ku-Curiosity Stream, ikhaya ezinkulungwaneni zamadokhumentari wobude obuhle, ne-Nebula, ikhaya labo bonke okukhethekile, amaphrojekthi akhethekile avela kubadali bakho obathandayo, kanye nezinguqulo ezingenazikhangiso zawo wonke ama-HAI nama-athikili e-wendover. Lokhu kuzuza ngobuhlanya futhi kutholakala kuphela uma ungena ku- CuriosityStream.com/HAI.
Ngilungisa kanjani idivayisi engaziwa kusiphathi sedivayisi?
Idivayisi engaziwa kusiphathi sedivayisi
VulaUmphathi wedivayisi. ...
Thayipha i-devmgmt. ...
Umphathi wedivayisikuvulwa (Umfanekiso 2). ...
Qhafaza kwesokudla ku - 'Idivayisi Engaziwa'bese ukhetha Izakhiwo (Umdwebo 3). ...
Khetha ithebhu yemininingwane. ...
Ulayini ophezulu kufanele ubhale into efana nalezi: PCI \_ VEN_8086 & DEV_1916.
Sanibonani nonke, wamukelekile esiteshini sami. Kulesi sihloko ngizokukhombisa ukuthi ungamfaka kanjani umshayeli wedivayisi engaziwa, ake siqale, ngemuva kokufometha ikhompyutha uzobona 'Idivayisi Engaziwa' kuhlu lwemenenja yedivayisi. Kulokhu singakwazi ukufaka lo mshayeli ngaphandle kokwazi igama, kufanele sichofoze ngakwesokudla ku-'Idivayisi Engaziwa 'bese uchofoza kuthebhu ethi' Imininingwane 'ukuze wazi igama.
Lapha leli nani yilokho ubunikazi bedivayisi. Manje sichofoza kwesokudla leli khophi lenani njengoba silifuna ku-inthanethi. Ngivala umphathi wedivayisi bese ngivula isiphequluli sewebhu.
Le nkinga ivame ukwenzeka kumakhompyutha weLenovo, ngakho-ke kufanele sivakashele ikheli support.lenovo.com Nginamathisela ubunikazi bedivayisi ebhokisini lokusesha phezulu ekhasini lewebhu bese ngiliseshela.
Ngichofoza umbhalo wesixazululo kumiphumela yosesho ukubona igama lomshayeli. Ikhasi lesisombululo lingitshela ukuthi ngidinga ukulanda nokusebenzisa uhlelo lokusebenza lokuphathwa kwamandla noma kwamandla. Kufanele sibhale imodeli yethu yekhompyutha kuleli bhokisi lokusesha ukuthola abashayeli abakhona.
Ngichofoza imenyu yokushayela neyesoftware ekhasini le-op ened, kufanele sikhethe uhlelo lwethu lokusebenza kanye ne-processor base ukulanda umshayeli wangempela, ngemuva kokukhetha izinkambu ezidingekayo izokhombisa umshayeli, chofoza kabili umbhalo bese uchofoza inkinobho Yokulanda. Ngemuva kokuthi ukulanda kuqedile, ngizoqalisa ifayela lokusetha. Samukela isivumelwano bese uchofoza inkinobho ethi 'Okulandelayo'.
Okokuqala, ukufakwa kuzokhipha wonke amafayela awadingayo kufolda oya kuyo. Inqubo yokukhipha isiqediwe. Ngizoshaya inkinobho ethi 'Okulandelayo' ukufaka amafayela akhishiwe.
Ngemuva kokuthi ukufakwa kuqediwe, ikhompyutha kufanele iqale kabusha. Ngikhetha u-'Hhayi 'ngoba ngifuna ukukubonisa umphumela. Ngiphinda ngivule umphathi wedivayisi futhi njengoba ubona ukuthi ayikho 'idivayisi engaziwa' ohlwini.
Singasusa ifayela lokusetha namafayela akhishwe ngemuva kokufakwa kokuqedwa. Siyabonga ngokubuka. Sicela ungakhohlwa ukuthanda, ukuphawula nokubhalisa.
Uyini umshayeli we-Apple null?
Ungafaka i- 'null driver'(okungukuthi, akukhoumshayeli) lwedivayisi uma ngabe idivayisi ingasetshenziswanga emshinini futhi akufanele iqalwe. ... Ngokwengeziwe, uhlelo luyafakaabashayeli abangenaluthoyamadivayisi angenawo umsebenziumshayeli, uma bekwazi ukwenza ngemodi eluhlaza.
Mhlawumbe usebenzise i-iPhone iminyaka noma usanda kushintshela kuyo. Kunoma yikuphi, kunezilungiselelo eziningi kakhulu okungenzeka awazi ngazo, kodwa kufanele ngempela. Zingahle zihlobene nokuphepha, noma ubumfihlo, noma zisebenziseke nje.
Namuhla sizoya ngaphezulu kwezilungiselelo eziyi-13 ku-iOS okufanele uzishintshe zisuka nje. Khumbula ukuthi lolu hlu luzobukeka luhluke kancane ngokususelwa ku-iOS 11. Singaqala ngezilungiselelo ezithile zobumfihlo njengoba ngicabanga ukuthi lezi zibaluleke kakhulu.
Owokuqala uzovimbela i-Apple ekulandeleni indlela oziphatha ngayo futhi ayisebenzise ukukukhangisa. Iya kuzilungiselelo, ubumfihlo, bese ezansi, Ukukhangisa, bese uvumela inketho ethi 'Khawulela Ukulandelelwa Kwesikhangiso'. Usazobona izikhangiso, kepha ngeke zisebenzise imininingwane yakho ukuletha.
Okunye ukusetha okufanele ukucishe kubuyele kwimenyu yobumfihlo, bese kuba yi-Analytics, lapha bengizocisha i-'Share iPhone Analytics 'ezothumela uhlelo lokusebenza zonke izinhlobo zemininingwane yokuthi uyisebenzisa kanjani ifoni yakho nedatha yendawo yakho. Izinkampani zihlala zisho ukuthi 'zenza umkhiqizo ube ngcono', kepha angithembi. Okulandelayo lapha kunenye enkulu ngempela okufanele uyicishe, futhi ngaphansi kwe-Ubumfihlo, bese kuba yi-Location Services, bese uqhafaza ku-'System Services 'ezansi impela.
Thola inketho ye-'App Apple-based Ads 'bese uyicisha. Kufanele kuchaze ngokwami, kepha angifuni nakancane ukukhipha ifoni yami ngempilo yebhethri ukuze nje ungithumelele izikhangiso, ihlaya elingakanani. Futhi njengasinye isilungiselelo esasenza ngaphambili, uma uskrolela phansi uzobona isigaba esibizwa ngokuthi 'Ukuthuthukiswa Komkhiqizo'.
Angifuni ukuthi i-Apple isebenzise imininingwane yakho nganoma yini. Okulandelayo kuhle kakhulu. Iya kuzilungiselelo, i-iTunes, ne-App Store, bese ubheka inketho yokulinganisela okuphakathi nohlelo bese uyicisha.
Lokhu kuvimbela izinhlelo zokusebenza ukuthi zingabuzi imibuzo, ngakho ungazihlola ku-App Store okunengeka ngempela. I-Apple isanda kushintsha izinqubomgomo zayo ze-App Store ukuze izinhlelo zokusebenza zinake lesi silungiselelo futhi zisebenzise i-API entsha ukucela izilinganiso. Kodwa-ke, lokhu kusho ukuthi insiza oyisebenzisayo kungenzeka ukuthi ayizange ibuyekezwe uma ingakabuyekezwa muva nje Ezinye izinhlelo zokusebenza ezisesikhathini futhi ezisangicasula ngezibuyekezo, ngakho-ke ngethemba lokuthi i-Apple izoqala ukuqhekeza izinhlelo zokusebenza, ezingacabangi le nketho.
Kepha kusamele kusize. Okulandelayo kuza esinye isilungiselelo kule menyu esibizwa nge-'Video Autoplay '. lapho unenketho yokunika amandla, ukhubaze, noma unike amandla kuphela uma i-Wi-Fi inikwe amandla.
Ngizokushiya lokhu kukhutshaziwe ngakho-ke lapho ngivula i-App Store akuqali ngokuzenzakalela ukudlala ukubuka kuqala kwe-athikili engingafuni ukukubona. Vele, usengazichofoza ukuze uzidlale ngesandla, engicabanga ukuthi kufanele kube njalo. Kulungile, okulandelayo kuhlobene nokuphepha ikhodi yokudlula enezinombolo ezine.
Ufuna okuthile okuqinile kunalokho ngezizathu eziningana, kepha ngazo zonke izindlela iya kuzilungiselelo, thinta i-ID nekhodi yokudlula bese uchofoza ku-'Shintsha ikhodi yokudlula '. Ngemuva kokufaka ikhodi yakho yokudlula kanye uzobona inketho ye 'Izinketho Zekhodi Yephasiwedi' ngakho chofoza kuyo. Lapha ungakhetha izinhlobo eziningana zamaphasikhodi.
Inombolo enamadijithi amane ibuthakathaka, futhi kungenzeka ukuthi akufanele uyisebenzise. Ngingancoma okungenani ukusebenzisa izinombolo zenkambiso nokukhetha okuthile okungenani ngamadijithi ama-5 noma ama-6. Noma khetha iphasikhodi ye-alphanumeric yezinga eliphakeme lokuphepha.
Inzuzo esobala yalokhu ukuthi kwenza kube nzima kakhulu ukuthi isela liqagele iphasiwedi yakho. Inombolo ngayinye eyengeziwe yenza iphasiwedi yakho iqine izikhathi eziyi-10, futhi uma usebenzisa i-Touch ID akudingeki uyifake leyo evamise ukwenzeka - iphasiwedi ende yenza kube nzima kwabanye ukukuhlola uma ufaka iphasiwedi yakho bese uyikhumbula njengokungathi Uma ubheka ngaphezu kwehlombe lakho, ungayifinyelela ngqo kusuka kusikrini sokukhiya ngaphandle kokuthi ifoni yakho ikhiyiwe. Ukulungisa lokhu, iya kumenyu ye-Touch ID nephasikhodi futhi bese uskrolela phansi kuzinketho ngaphansi kokuthi 'Vumela ukufinyelela lapho kukhiyiwe'.
Bheka lezi bese ubona ukuthi ngabe ufuna ukukhubaza noma yiziphi. Isibonelo, awufuni ukuthi umuntu othile akwazi ukubuyisa ikholi egejiwe ngaphandle kokufaka iphasiwedi. Noma, uthi unokukhiya okuhlakaniphile emnyango wakho noma okuthize, mhlawumbe ufuna ukucisha i-'Kulawula kwasekhaya 'ukuze kungabikho muntu ongavula umnyango wakho esikrinini sokukhiya.
Kepha enkulu impela nguSiri. USiri angenza okuningi, futhi ungahle ungafuni ukuthi abantu bakwazi ukukufinyelela kusuka kusikrini sokukhiya. I-Apple iyithuthukisile empeleni ukuze ufake ikhodi yakho yokudlula ukuze ufinyelele emininingwaneni ebucayi njengama-imeyili akho, isakhombisa wonke umuntu ngaphandle kwephasikhodi ocingweni lokugcina.
Ngakho-ke uma ungasebenzisi iSiri kusuka esikrinini sokukhiya kaningi, kungcono ukuyishiya ikhubazekile. Lesi silungiselelo esilandelayo sihlobene nokuqinisekiswa kwezinto ezimbili, into engihlale ngiyikhuthaza, kuzilungiselelo, chofoza igama lakho phezulu ukuze ubone i-Apple ID, iCLoud, ne-iTunes. Bese c Chofoza Iphasiwedi nokuphepha bese unika amandla 'Ukuqinisekiswa Kwama-Two-Factor'.
Inqubo ikwenza ukuthi njalo uma ufuna ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Apple kusuka kudivayisi entsha, kufanele ufake ikhodi yesibili, ethunyelwa kwinombolo yakho yocingo noma ekhonjiswe kwelinye lamadivayisi wakho we-iOS. Lokhu kuhle ngezizathu eziningi, ikakhulukazi uma ngandlela thile umuntu othile ethola iphasiwedi yakho, efana neB kusuka kwelinye ikhefu ledatha ongazi ngalo.
Futhi, omunye umuntu angahle ashayele i-Apple Support futhi abakholise ukuthi banguwe futhi lonke ulwazi lwakho lushintshiwe. Yilokho kanye okwenzeka kimi kanye. Akudlalwa, umuntu waseChina obizwa nge-Apple Support, ushintshe imininingwane yami ye-password ne-akhawunti, wasebenzisa lonke isikweletu sami se-iTunes kuhlelo lokusebenza olungahleliwe.
Ngenhlanhla, kwakungumkhonyovu osobala ukuthi i-Apple yakwazi ukungibuyisela yonke into. Ukuvula ukufakazela ubuqiniso bezinto ezimbili kwenza kube nzima kakhulu ngomuntu ukuzenza ongeyena. Ngokuvikeleka okuphezulu, futhi ungavula inketho yokhiye wokutakula.
Ngigcina ukubheka, uyithola uma uyibhalisela, kepha uma ufuna ungayimisela KUPHELA sebenzisa ukhiye wakho wokuthola kabusha ukusetha kabusha iphasiwedi yakho. Ngisho nommeleli wosekelo we-Apple akakwazi ukukwenza. Vele, uma wenza kanjalo, UNGAKULAHLEKI ISIHLUTHULELO.
Yenza amakhophi ayo amaningi, uwugcine endaweni ephephile njengephasiphothi yakho noma eminye imibhalo ebalulekile ngoba uma ulahlekelwa yiyo ukhohlwa iphasiwedi yakho, uzolahlekelwa unomphela i-akhawunti yakho ye-Apple ngaphandle kwalo khiye wokutakula. Kulungile, sidinga ukushintsha izilungiselelo ezimbalwa. Ngokulandelayo iya kuzilungiselelo, ukuKhanya nokuKhanya kanye ne-Auto Lock.
Uma unalokhu kulungiselelwa, ifoni yakho ivikeleka kakhudlwana. Uma ubeka nje phansi ifoni yakho, kuzothatha isikhathi eside ukuthi ifoni yakho izivale. Vele ukuthi 'never' akuwona umqondo omuhle ngoba lapho-ke noma ngubani odlula lapho angangena ngaphakathi kwefoni yakho ngaphandle kokuthi ibhethri lifile, ungakusetha lokhu kube imizuzwana engama-30 kodwa empeleni ngikubekele umzuzu owodwa, ngoba isikrini sizofiphala imizuzwana eyi-10 ngaphambi kokukhiya.
Lokho kusho ukuthi, uma ivuliwe imizuzwana engama-30 bese uthi ufunda okuthile futhi ungasithinti isikrini, kuzofiphala ngemuva kwemizuzwana engama-20, okucasula kakhulu Izintandokazi futhi kungenzeka usuvele usazi lesi sici njenge-'Night Shift '' okubhekiselwe kuye njengo-. Ngaphansi kwezilungiselelo, iya ku-Display and Brightness, bese kuba Night Shift. Lesi sici sikuvumela ukuthi ushintshe umbala wesikrini ebusuku ukuze ungacasuli kakhulu amehlo akho futhi lokhu kukwenza ube liwolintshi kancane.
Lokhu kunciphisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuvela esikrinini, okwaziwayo ukuphazamisa ukulala kwethu. Ngingancoma ukuyibeka kuma-max, futhi ungikholwe, mhlawumbe ngeke uze uwubone umehluko ngoba amehlo akho azowujwayela, kepha kuzosiza. Futhi ngithanda ukugcina okwami ​​kusuka ekuphumeni kwelanga kuye ekushoneni kwalo ngakho-ke kuguqule ngokuzenzakalela.
Kepha ungabuye uyivule ngesandla noma ukhethe izikhathi zakho ukuze uyihlele, futhi uma ungabaza, zama ukuyishiya amahora ambalwa ebusuku, bese uyicisha umzuzwana, nami ngimuhle Qiniseka ukuthi uzomangala. Kulungile, sekuqediwe, ngithanda okulandelayo futhi. Iya kuzilungiselelo phezulu, chofoza ku-ID yakho ye-Apple, bese ku-iCloud, bese uthi 'Thola i-iPhone yami'.
Yebo, ngiyazi ukuthi usuvele uvule i-Find My iPhone, kepha akusikho ukuthi silapha. Ufuna ukwenza kusebenze isilungiselelo 'Thumela indawo yokugcina'. Lapho ibhethri lefoni yakho liphansi lithumela isinali lokugcina lendawo elikuyo.
Uma ukhohlwe ifoni yakho kwenye indawo, okungenani uzokwazi ukuthi ubheke kuphi kuqala. Futhi uma ingakasuki kusukela lapho, ngethemba ukuthi kufanele ihlale ikhona. Futhi ekugcineni, lokho kulungiselelwa kungahle kube kuhle ukushintshela noma ngubani onecebo ledatha elinganiselwe, okungenzeka ukuthi iningi labantu liyilo.
Iya ku-Amasethingi, Amaselula bese ubheka i-'Wi-Fi Assist 'ezansi. Lokhu kuvumela ifoni yakho ukuthi ibuyele emuva kudatha yeselula lapho inethiwekhi yamanje ye-Wi-Fi inokuxhumeka okungalungile. Lokho kuzwakala kukuhle, kepha uma ukuhlelo lwedatha elinganiselwe, kungadla idatha eningi a.
Empeleni kukhombisa khona lapho ukuthi kusetshenziswa idatha engakanani. Ngakho-ke uma kungenjalo, ungavele ukushiye kuqhubeke. Futhi-ke uma unedatha engenamkhawulo, ungayigcina ngoba ayinandaba.
Kepha uma unesigqoko sedatha futhi ubona ukuthi yisb. Isibonelo, uma usebenzisa ama-megabytes angamakhulu ambalwa noma ngaphezulu, kufanele ucishe lokhu uma ujwayele ukuphela kwedatha inyanga ngayinye.
Ngakho-ke, lokho kufanele kukumboze. Ngabe unabo abanye ngempela? Izilungiselelo ezinhle zokushintsha, sazise kumazwana futhi siphinde sihlole lapho ukubona ukuthi ngabe ukhona yini umuntu ongathola okuthile engingakwenzanga. Uma ufuna ukuqhubeka ubukele ngizothumela ezinye izindatshana ezimbalwa lapha, futhi uma ufuna ukubhalisa, ngizokwenza izindatshana ezintsha njalo ngoLwesibili, ngoLwesine, ngoMgqibelo.
Futhi, cabanga ngokuvula izaziso ngokuchofoza insimbi noma i-YouTube mhlawumbe ngeke ikubonise noma yimaphi ama-athikili amasha, ngakho-ke ngiyabonga ngokubuka. Ngizokubona ngokuzayo, uzijabulise.
Ngabe umshayeli ongasebenzi angafakwa yini kudivayisi?
Ungafaka i-'null driver '(okusho ukuthi, umshayeli ongekho) wedivayisi uma ngabe idivayisi ingasetshenziswa emshinini futhi kungafanele iqalwe. Amadivayisi anjalo awavamile ukuba khona emshinini, kodwa uma ekhona, ungafaka umshayeli ongasebenzi.
Kusho ukuthini uma idivayisi ingasebenzi?
Idivayisi engelutho isho ukuthi ayikho idivayisi esebenzayo. Nakhu ukulandelana kwekhodi emfushane ebengikuthola ukuthola ukuthi ngabe nginedivayisi evulekile (dev.cur) bese ngiyayivala (dev.off). Lapho ngiyivala, idivayisi esele kwakuyinto engelutho.
Kusho ukuthini uma uhlelo lwehluzo lungasebenzi?
Idivayisi engelutho isho ukuthi ayikho idivayisi esebenzayo. Nakhu ukulandelana kwekhodi emfushane ebengikuthola ukuthola ukuthi ngabe nginedivayisi evulekile (dev.cur) bese ngiyayivala (dev.off). Lapho ngiyivala, idivayisi esele kwakuyinto engelutho. Incazelo yesystemyystem ihluzo ayicaci kangako. Lokhu kubukeka njengekhasi kuphela kulo lonke usizo olusebenzisa leli gama.
/ Kwenziwa ini / dev / null ku-Unix?
Kodwa-ke, ngokungafani namanye amafayela abonakalayo, esikhundleni sokufunda, kusetshenziselwa ukubhala. Noma yini oyibhalela / i-dev / null izolahlwa, ikhohlwe ize. Yaziwa njengedivayisi engasebenzi ohlelweni lwe-UNIX. Kungani ungafuna ukulahla okuthile ku-void?